Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo Beenisay Qodobadii ka soo baxay Shirkii Midowga Afrika | Aftahan News
Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo Beenisay Qodobadii ka soo baxay Shirkii Midowga Afrika
Muqdisho (Aftahannews) – Wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in ciidamada AMISOM ay la soconayaan dhaq dhaqaaqa ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoo uu jiro khilaaf siyaasadeed oo halis gelinaya wada shaqaynta AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi fataax Qaasim ayaa ku tilmaamay go’aankaas wax laga xishoodo maadaama ayna ka mid ahayn waajibaadka AMISOM, wuxuuna intaas ku daray dowladda Soomaaliya in ayna aqbali doonin dawladaha aan rabin ciidamada Soomaaliya in ay horumar sameeyaan.
“AMISOM shaqadeedu waa in ilaaliso dhismooyinka dowladda, arrimaha bulshada iyo ka hortagga argagixisada, ”ayuu yidhi wasiir ku xigeenka gaashaandhiga Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad ka dhacay magaalada Muqdisho.
Hadalka ka soo yeedhay wasiir ku xigeenka gaashaandhiga ayaa u muuqda mid bilow u ah khilaaf cusub oo u dhaxeeya dowlada federaalka iyo Midowga Afrika waxaana dowlada federalka lagu wadaa inay qoraal soo saarto go’aanka Midowga Afrika.
Habeenimadii Khamiista ayaa bayaan ay soo saareen Midowga Afrika waxay kaga codsadeen AMISOM, inta laga cusboonaysiinayo waajibaadkooda, in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada Ciidamada Amniga ee Soomaaliya.